Tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny wasabi-News-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny wasabi
Fotoana: 2021-05-10 Hits: 21
Ny tombontsoa ara-pahasalamana Wasabi dia ny fisorohana ny fanapoizinana ara-tsakafo, antiparasite voajanahary, fanaraha-maso ny kolesterola, fisorohana ny lavaka, hahatonga anao ho tanora, tsara ho an'ny rafi-pitetezana, mamehy ny fiakaran'ny tosidra, miady amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana, mitsabo aretin-tratra, manapaka ny risika homamiadana, miady amin'ny hatsiaka ary manala ny vatana.
Isothiocyanates (ITCs) no sokajin-tsokajy mpiorina mavitrika amin'ny wasabi ary tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny tombontsoa ara-pahasalamana ny legioma, ao anatin'izany ny vokatry ny bakteria.
Wasabi dia mety manana toetra manohitra ny inflammatoire mahery.
Ny fivontosana dia ny valin'ny hery fiarovanao amin'ny otrikaretina, ratra ary poizina, toy ny rivotra maloto na setroka sigara, amin'ny fiezahana hiaro sy hanasitrana ny vatanao.
Rehefa lasa tsy voafehy sy mitaiza ny fivontosana, dia afaka mandray anjara amin'ny toe-javatra mampihetsi-po marobe, ao anatin'izany ny aretim-po, diabeta ary homamiadana.
Ny fandinihana ny fantsom-pitsapana mifandraika amin'ny sela biby dia manondro fa ny ITC amin'ny sela wasabi dia manakana ny sela sy ny anzima izay mampiroborobo ny fivontosana, ao anatin'izany ny Cyclooxygenase-2 (COX-2) sy ny cytokines mamaivay toy ny interleukins sy ny tumor nekrosis factor
Taloha: SIAL CHINA
Next: Maninona no mahasolo divina ny divay mahandro?